उपेन्द्र सुब्बा हङकङमा… | WWW.HATTERI.COM
You are here : WWW.HATTERI.COM » Literature » उपेन्द्र सुब्बा हङकङमा…
उपेन्द्र सुब्बा हङकङमा…
प्रकाशित मिति Thursday, March 24, 2016
उपेन्द्र सुब्बाको विदेश भ्रमण हङकङबाट शुरु हुने भएको छ। समीक्षक समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाग लिन उपेन्द्र सुब्बा संभवत: मार्च ३१ तारीख हङकङ आइपुग्नेछन् । अप्रिल ३ तारीख फ्रेन्डसीप् क्लब याउ मा तेइमा हुने भनिएको कार्यक्रममा कवि मनु कन्दङवाको कविता कृति “बलिहाङतड्नाम: मेरो मानसपटलमा”को लोकार्पण साथै उपेन्द्र सुब्बाको कविता वाचन र उनीसँग अन्तरक्रिया गर्न पाइने समीक्षक समाजका संयोजक हेम लावतीले बताएका छन् ।
नेपाली साहित्यमा थोरै मात्रै रुचि राख्नेले पनि उपेन्द्र सुब्बालाई चिनि नै हाल्छन् । ‘सृजनशील अराजकता’ का ३ स्तम्भमध्ये हाङयुग अ्ज्ञात हङकङमै बसोबास गरिरहेका छन् भने, राजन मुकारुङ हङकङ आएर गइसकेका छन् , अरु कहीँ नभए पनि हङकङ चाहिँ एक पटक टेकेरै छोड्ने धोको राखेका तेस्रा अराजक उपेन्द्र सुब्बाको मनसुबा अन्तत: पूरा हुने भएको छ भने उपेन्द्र सुब्बालाई युट्युबमा हेर्दै आएका हङकङेलीहरु उनीसँग साक्षात्कार गर्न ब्यग्र छन् ।
को हुन उपेन्द्र र के छन् उनका विचार? उनको बारेमा केही जानकारी अन्य वेबसाइटबाट साभार गरी तल राखिएको छ
विजेताः अब यस्तो प्रेमिकाको सपना छ, जसको प्रेममा बर्बाद होइजाऊँः उपेन्द्र सुब्बा
उपेन्द्र सुब्बा नेपाली साहित्य र सिनेमामा प्रिय नाम हो । जीवनलाई नजिकैबाट छोएर लेखिएका उनका कविताले पाठकको हृदय र मस्तिष्क दुवै झंकृत पार्छन् । पछिल्लो कविता संग्रह ‘खोलाको गीत’ त्यसकै नमूना हो । कथामा आफ्नै भूगोल र संस्कृतिको जीवनलाई खिच्छन् र पाठकलाई हसाउँदै–हँसाउँदै संवेदित पार्छन्, आन्दोलित गर्छन् । उनको पहिलो कथा संग्रह ‘लाटो पहाड’ले यस बर्षको ‘पद्मश्री पुरस्कार’ प्राप्त गरेको छ । उनको लेखकीय क्षमता सिनेमाले पनि देखिसकेको छ । उनले ‘कबड्डी’ सिनेमाबाट उत्कृष्ट स्क्रिप्टको राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गरे । जसको सिक्वेल ‘कबड्डी कबड्डी’को सफलताले त नेपाली सिनेजगतलाई नै सोचको सागरमा धकेलिदिएको छ । कला अनुरागीसँगको कुराकानीमा नेपाली साहित्य र सिनेमामा आफ्नो विजय–यात्राबारे सुब्बा यसरी प्रस्तुत भए :
मैले नसोचेकै पुरस्कार पाएँ । न त साहित्यमा पद्मश्री पुरस्कार आस गरेको थिएँ, न ‘सिनेमा स्क्रिप्ट’मा ‘नेसनल अवार्ड’को नै । तर पनि मैले पुरस्कारलाई ‘सेलेब्रेट’ गर्नै सकिनँ । पुरस्कारबाट उत्साहित हुने पनि एउटा उमेर हुँदो हो । त्यो उमेर पार गरेपछि यस्ता कुरा सामान्य र स्वाभाविक लाग्दो रहेछ कि के हो ? मैले त्यस्तो विशिष्ट अनुभूत केही पनि गरिनँ ।
मलाई गाली गर्ने पाठकसँग अहिलेसम्म भेट भएको छैन । साहित्यिक वृत्तमा नराम्रो नभन्दिँदा रहेछन् । नेपाली समाज नै यस्तो रहेछ कि ! आफूलाई नराम्रो लागे पनि श्रष्टा नै भेट्दा चाहिँ बडा राम्रो भनिदिने गर्दा रहेछन् ।
‘लाटो पहाड’ राम्रो त सबैले भने । तर पुस्तकको बिक्रि हेर्ने हो भने राम्रो लागेछ भन्ने लाग्दैन । करिब ३५ सय किताब बिक्रि भएको छ । अहिले सामान्य चर्चा भएको किताब नै १०–१५ हजार बिक्रि भयो भन्छन् । यो हिसाबले पाठकले त्यस्तोविधि रुचाए भन्नेचाहिँ लागिरहेको छैन । सामान्य नामचाहिँ लिए । ‘लाटो पहाड’भित्रका कथाको समाज र संस्कृति फरक थियो । त्यसैले पढ्नेलाई नयाँ लाग्यो होला । यसरी नाम लिएको हो कि ? तर कथा राम्रै भएर नाम लिएको हो भन्नेमा चाहिँ शंका नै छ है ।
पहिलो चरणमा हामी कवितामात्रै लेख्थ्यौं । राजन मुकारुङ आख्यानमा आउनुभयो । उहाँको दुई उपन्यास आइसक्दा हाम्रा बिषय र मुद्दा निकै फराकिलो बनिसकेको थियो । त्यही फराकिलो मैदानमा मैले सहज रूपमा उपस्थिति जानाउन सकें । तर राजन मुकारुङलाई निकै कठिन भएको थियो । उहाँको पहिलो उपन्यास ‘हेच्छाकुप्पा’ निस्कँदासम्म मुद्दालाई हेर्नेे सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिकोण खराब नै थियो । संकीर्ण थियो । ‘लाटो पहाड’ आउँदाचाहिँ उहाँले मदन पुरस्कार पाइसक्नुभएको थियो। मुद्दा राजनीतिक रूपमा पनि सतहमा आइपुगेको थियो । त्यसैले मलाई निकै सहज भएको अनुभव गरेँ ।
मेरो मनमा दुइटा कामनाचाहिँ छ । एउटा, यस्तो प्रेमिकाको कल्पना गर्छु, जसको प्रेममा म बर्बाद होइजाऊँ । जसको लागि यो संसारमा जिऊँ, यो सांसारिकता भोग्नका लागि । दोस्रोचाहिँ म त्यस्तो गुरूको प्रतिक्षामा छु कि उसले मलाई यो संसारबाट मुक्त गरिदिओस् । यत्ति दुइटा कुराको मात्रै चाहना छ । अरू कुनै चाहना छैन ।
जब मैले ‘कबड्डी’बाट उत्कृष्ट स्क्रिप्ट लेखकको अवार्ड प्राप्त गरेँ, धेरै सिनेमा लेखाउन । त्यस क्रममा मैले भनें, ‘जुन खर्चमा नेपाली सिनेमा लेखिरहेका छन् अरू स्क्रिप्ट राइटरले । त्यो खर्चमा म लेख्न सक्दिनँ ।’ त्यसो भनेपछि आधाजति भागे । आधाले चाहिँ मेरो आइडिया मन पराउनुभएन । मलाई उहाँहरूको आइडिया मन परेन । उहाँहरू ‘कबड्डी’ चलेपछि त्यस्तै लेखाउन खोज्ने, म त्यस्तै त लेख्नै चाहन्नँ । त्यस्तो हुँदा हुँदै नेपालका चर्चित निर्देशक र ठूला सिनेमा हाउससँग बसेँ स्क्रिप्टको प्रस्तावमा । तर कुरा नमिलेपछि टार्न थालेँ । भोलि भेटूँ, पर्सी भेटूँ, म आउँदैछु भन्दै । लेख्दिनँ नै भनेर त कसैलाई भनिनँ । तर कतिले दुई–तीन महिना भएपनि आफैं बुझे अब यसले लेख्दैन भनेर । कतिले चाहिँ कति लिनुहुन्छ त भनेर सोधे । मैले ढ्याम्मै भनिदिएँ, यति लिन्छु भनेर । उनीहरूले आत्तिए र भने, ‘त्यति त हिरोलाई पनि दिने गरेको छैन ।’
मैले लेखेका सिनेमा दर्शकले मन पराए । पुरस्कार पनि पाएँ । मैलेचाहिँ पैसाको अभावका कारण सिनेमा लेखेको हुँ, दुई–चार पैसा आउँछ भन्ने लोभमा । नेपाली सिनेमाको ‘टे«न्ड’ नै बदलिदिन्छु भन्ने सोचाइ आएरचाहिँ होइन । यत्ति हो कि म नेपाली सिनेमामा जे छैन, त्यही लेख्छु भन्नेचाहिँ लाग्छ । नेपाली सिनेमामा नेपाली नै भाषा, संस्कृति, चरित्र होस् भन्ने सोचेर लेख्छु, त्यो पनि साथीहरूसँग मिलेर । पैसा कमाउने कुराचाहिँ दोस्रो कुरा हो । सिनेमामा नेपाली सौन्दर्य होस् भन्ने ध्येय रहन्छ ।
मैले ‘कबड्डी’मा एउटा सानो भूमिकामा अभिनय गरेँ । ‘कबड्डी कबड्डी’मा त्यही भूमिका अलि विस्तार भएको थियो । तर त्यसपछि अभिनय गर्दिनँ भनेर कानै समाएँ । गाडीमा पनि चिन्छन् । कुनै समारोह त जानै नहुने ! अस्ति, ल्होसारको कार्यक्रममा गएको । फोटो खिच्दा–खिच्दा लाजले हरियो नीलो भएँ । एउटा कलाकार हुने सपना भा’को मान्छेलाई त यो धेरै राम्रो कुरा हो । तर म कलाकार हुने सपना भएको मान्छे होइन । कवि बन्न चाहने मान्छे हुँ, कवि भनिदिओस् भन्ने रहर भएको । मलाई त्यो कलाकार बनेर भएको चर्चाचाहिँ फिटिक्कै मन परेन ।
त्यसैले अबदेखि गर्दिनँ ।
म गीतकार बन्ने सपनाका साथ राजधानी आएको थिएँ । सफलता पनि पाउन थालेको थिएँ । कसैले नचिन्दै मैले लेखेको गीतको रेडियो नेपालमा तेस्रो भएको थियो । संगीतकार शान्तिराम राईले तीनवटा संगीत गर्दा एउटाचाहिँ रेडियोको प्रतियोगितामा भिडाउनुभएको रहेछ । त्यसपछि पनि मेरा गीत स्थापित गायक दीप श्रेष्ठ, आनन्द कार्की, यम बराल, रोविन शर्मालगायतले गाउनुभयो । झण्डै दर्जन गीत रेकर्ड पनि भए । केही गीत चर्चित पनि भए । तर मलाई गीतको प्रक्रिया निकै झन्झटिलो लाग्यो । लेखेरमात्रै नहुने संगीतकार चाहिने । त्यतिलेमात्रै नहुने, गायक चाहिने । दुनियाँ खर्च चाहिने । अर्कातिर म जस्तो गीत लेख्न चाहन्थेँ, बजारले त्यस्तो नरूचाउने । म जीवनवादी खालको, अलि आध्यात्मिक किसिमको गीत लेख्न चाहन्थेँ । त्यस्तो गीतचाहिँ कसैले नमाग्ने, मायाप्रिती, टाँटाँ टँुटँु, दोहोरी र हल्का खालका गीतमात्रै माग्ने । त्यसपछि मैले लेख्दिनँ भनेर छोडिदिएँ ।
अहिलेको उपेन्द्र सुब्बा बन्नुमा सम्पूर्ण रूपमै ‘सिर्जनशील अराजकता’ आन्दोलनकै हात छ । आन्दोलनअगावै पनि म कविता त लेख्थें । तर त्यतिबेला मेरो लेखन विचार र सिद्धान्तविहिन लाटो पाराको थियो । मैले लेख्न र बोल्न सक्ने पनि त्यति नै थियो । आन्दोलनले मलाई आवाज र अर्थ दियो । मैले बाटो भेटेँ ।
– See more at: http://www.ratopati.com/photo-news/24337/#sthash.DBMbJ13T.dpuf
दीपक सापकोटा सम्पादित ‘पाण्डुलिपि’ मासिक २०७१, वर्ष १, अङ्क २, जेठ बाट
हरिप उपेन्द्र सरिफ उपेन्द्र- राजन मुकारुङ
(उपेन्द्र सुब्बा बारे राजन मुकारुङ)
म कति हरिप छु भन्ने त मलाई पो थाहा छ त ।’ यहाँ यी ‘हरिप’ उपेन्द्रबारे उनीसँगको मेरो बसउठलाई लेख्न बसेको छु म ।
अहिले झट्ट देखिँदा बब मार्लीजस्ता देखिन्छन्, रङ्गकर्मी सुनील पोखरेल र म उनलाई उपेन्द्र मार्ली भनेर पनि गिज्याउँछौ तर घृणाले कदाचित् होइन, साँच्चीकै सम्मान र प्रेमले । मझौला कद, गोलाकार अनुहार, चिम्सा आँखा, हल्का थेप्चो नाक, थोरै बोल्ने, मन खुस गरेर हाँस्दा निदाएझैँ देखिने, ‘हेहेहे’ गर्दा आउने आवाजमा मधुर घोर्लेपना, खाँट्टी लिम्बू पहिचानधारी, त्यसबेला तासफोटोजस्तै ‘क्लिन’ गीतकार मात्रै थिए उपेन्द्र सुब्बा । उनी रेडियो नेपालले गर्ने आधुनिक गीत प्रतियोगितामा पुरस्कृत भइसकेका थिए । गीतकै ‘एल्बम’ निकाल्न काठमाण्डू आएका हुन् भन्नेसम्म थाहा थियो हामीलाई । कविता वाचनको कार्यक्रम सकिएपछि जाँडपानी चलिहाल्थ्यो । अनि हुन्थ्यो ‘सिर्जनशील अराजकता’बारे विमर्श । उनी चासोले सुन्थे हाम्रा कुरा । के के नमिलेर ‘किम्ची कविता अभियान’ पनि त्यतिकै थला प¥यो । अनि हामी तीनजनाको (हाङ्युग, उपेन्द्र र मेरो) मात्रै भेट हुने थलो बन्यो किम्ची ।
उपेन्द्र सुुब्बा र राजन मुकारुङ ।
एक साँझ हाङ्युग आएनन् । उपेन्द्रले थोरै लजाउँदै भने, ‘सर, म पनि कैलेकहीँ यस्सो कविता लेखिटोपल्छु । खै के भाको ? मेरो त कविता नै हुँदैहुँदैन ।’
कविताको सन्दर्भमा उपेन्द्र सुब्बा सबैका लागि प्रिय र आत्मीय नाम हो । झर्रा कुराहरू, झर्रा दर्शनहरू र झर्रा चिन्तनहरू पनि भनूम्, ठेट बिम्ब र प्रतीकहरूले संयोजित सरल र सपाट कविता लेख्न माहिर, मुन्धुमि लय र तानसहित लोरी सुन्दासुन्दै जसरी शालीन बनिसकेर बालक निदाउँछ, ठीक त्यसरी नै भद्र बन्न बाध्य पार्छन् उपेन्द्रका कविताले ।
कतिपनि उग्रता पाइँदैनन् उनका कविताहरूमा, न त शास्त्रीय जडताहरू नै जबरजस्त घुस्छन् । पाठकको दिमागलाई ‘ड्यामेज’ गरिदिने दुस्साहस पनि गर्दैनन् उनका कविताहरूले । बरु, पाठकहरू सहज पठन गर्छन्, एकै पटकमा पढिसक्छन्, ‘रि–फ्रेस’ हुन्छन् । किताबका पानाहरू बन्द गरेर उनकै कविताका पङ्क्तिहरू भन्न थाल्छन् :-
‘समानान्तर’ दुःखको यो फिलिङ्गोले छोरा पुस्ता अर्थात् हाम्रो आजको पुस्तालाई गम्भीर व्यङ्ग्य गर्छ । सरल भाषा र शैलीमा भन्छ र त हामी ‘हो नि’ भन्न बाध्य हुन्छौँ । हाम्रा आदर्शहरू, तीव्र प्राप्तिका सपनाहरू वा गोलमटोल महत्वकाङ्क्षाहरू ती सबै छरपस्ट छन् । हामी निर्दिस्ट छैनौँ । बेचैनीका कारण हाम्रो लक्ष्य बिटुलिएको छ । ‘सहर’ अर्थात् हाम्रो ‘समय’ले हामीलाई यतिबिघ्न जर्जर बनाइसक्यो कि हामी आफ्नै रहस्यहरूको गहिरोमा फसिसक्यौँ । हाम्रो चिन्तनको ‘लय’ वा ‘तन्मयता’ भङ्ग भइसकेको छ ।
हामी ‘क्षणभङ्गुरतावादी’ संस्कृतिको फेरोमा लट्किएका छौँ । ‘क्षणभर’ बाँच्नुको अर्थबोधमा हामीले जीवनलाई खामबन्दी गरिदियौँ । त्यसले हामीलाई आडम्बर मात्रैको सुख दिएको छ । तर, आम मान्छेहरू ठूल्ठूला सपनाहरू देखेर कहाँ बाँच्छन् र ? सामान्य जीवन–गुजाराको सपना मात्रै हुन्छ खासमा उनीहरूको । समयको झोक्काले ‘देखासिकी’मा बाँधिदिएर मात्रै हामी आडम्बरी बाँच्न खोज्छौँ, त्यसैले हामीलाई रसातलमा भसाएको छ । उपेन्द्रको काव्यिक दर्शन यही हो । उनी त्यो रसातलबाट बाहिर निस्कने उपाय सुझाउँछन् कलात्मक पाराले ।
कवि भएर बूढोले सुख नदिने भएपछि भाउजूले चाहिँ विदेश जाने निर्णय गर्नुभएछ । थाहै नदिई जानुभएछ । तब पो उपेन्द्र छाँगाबाट खसेझैँ भए । अत्तालिएर धरान हान्निए । केही समयपछि छोरी लिएर काठमाण्डू आए । एक्ली छोरी, काजोल साह्रै पुल्पुलिएकी, जस्तो पाक्यो त्यस्तो नखाने, भात त झन् फिटिक्कै, हेर्नै नमान्ने ।
काठमाण्डूबाट दिक्क भएर दमक बस्दा यिनले विरु स्वामि (वनेम लिम्बू)लगायतका ओशोका अनुयायी युवाहरू भेटे । उनले पनि ओशो पढे । त्यतिले मात्रै उनलाई पुगेन, साधु–सन्यासी आदिका बारे पनि बुझ्ने प्रयास गरे । आध्यात्मिक चिन्तनका किताबहरू खूब पढे । तिनले उनलाई आध्यात्मिक बन्न उत्प्रेरित गर्‍यो । ‘धर्म’ नामको ‘अफिम लत’मा लठ्यायो पनि । त्यहीवेला उनले कपाल पाले, अहिले जट्टा पालेका छन्, आजको पुस्ताले ‘डेडलक’ भन्छन् । त्यही गरेका छन् । तर, उनी पूरै आध्यात्मिक होइनन्, अलिअलि मात्रै हुन् ।
उपेन्द्र ‘विदेश जान्छु’ भनेर पनि काठमाण्डू आएका रहेछन् । यता कवि दरिने लहडमा अल्मलिएर सबै भुलिपठाएछन् । धरानमा हुनुहुन्थ्यो भाउजू, छोरी काजोललाई स्याँहार्दै । कवि भएर बूढोले सुख नदिने भएपछि भाउजूले चाहिँ विदेश जाने निर्णय गर्नुभएछ । थाहै नदिई जानुभएछ । तब पो उपेन्द्र छाँगाबाट खसेझैँ भए । अत्तालिएर धरान हान्निए । केही समयपछि छोरी लिएर काठमाण्डू आए ।
एक्ली छोरी, काजोल साह्रै पुल्पुलिएकी, जस्तो पाक्यो त्यस्तो नखाने, भात त झन् फिटिक्कै, हेर्नै नमान्ने । चाउचाउ, कुर्मुरे, क्याटबरीमा मात्रै मनखुस पार्ने । काठमाण्डूमा पैसाको उस्तै अभाव । उपेन्द्रले निकै कठीनसाथ छोरीका मागहरू पूरा गरे । थपमा कोरीबाटी, नुहाइधुवाइ सबैमा दख्खल दरिए । एक असल बाबु गनिए ।
यस्तरी किस्साहरू भन्छन् कि तिनले हँसाउँदैनन् मात्र, अन्तमा जीवनलाई बुझ्ने नयाँ सिरा पनि तयार गरिदिन्छन् । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले प्रायः एउटा ‘जोक’ भनिमाग्छन् । म पनि भन्छु, ‘सर, एउटा पिस जावोस् न !’
उपेन्द्रका बाबुका बाबु पनि एक्ला छोरा थिए जिजुका । उपेन्द्रका बाबु पनि एक्ला छोरा नै हुन् र उपेन्द्र स्वयं पनि एक्ला छोरा नै हुन उनका बाबुका । उपेन्द्रका भने अझैसम्म छोरो भएको छैन । दुई छोरीहरू छन् काजोल र लोजी । उनलाई अब ‘वंश बुट्टिने हो कि ?’ भन्ने डर छ । उनको यो डरमा चिन्ता मिसिएको छ र त्यही चिन्ता उनको अदेखा पीडा भएको छ ।
उनी छोरीहरूलाई असाध्यै माया गर्छन् तर छोरा नभएकोप्रति भने गुनासो छ जीवनको । ‘आजको जमानामा पनि छोराको कुरा ?’ प्रश्न उठाउन सकिन्छ, धेरैपल्ट उठाएको छु मैले पनि । तर, उनको आफ्नै जवाफ छ, खिपेर राखेको । ‘फन्नी’ पाराले जवाफ दिन्छन्, ‘माया त म मेरो छोरीलाई कति गर्छु कति तर पछि शत्रुको छोराले पनि फकाइलान्छ र पो त ।’ यो जवाफ ‘फन्नी’जस्तो अवश्य लाग्छ तर यो जवाफभित्र लुकेको पीडा धेरै उपेन्द्रहरूको साझा र अदेखा पीडा हो । सबैले दुख्नै पर्छ आखिर । भलै, उपेन्द्रजस्ता सरल मान्छेको पनि कोही शत्रु होला र ? यो प्रश्न भने देखा प्रश्न हो फेरि ।
हामीर्‍यालसिंगान भएका थियौँ । त्यो किस्साले आज पनि मलाई समातिरहेको छ । जीवनको बारे सोच्दासोच्दै अलि बढी ‘क्रिटिकल’ हुन थाल्नासाथ म यो किस्सा सम्झन्छु र आफूलाई ‘रि–फ्रेस’ गराइहाल्छु ।
(निबन्धकार दीपक सापकोटा सम्पादित ‘पाण्डुलिपि’ मासिक २०७१, वर्ष १, अङ्क २, जेठ बाट)
« शरिर गन्हाएको भन्दै युवकले आत्महत्या गरे
मंकिहिलमा बाँदर सिकारी पक्राउ »